बीबीएलः सेमिफाइनल पुग्न सन्दीपको टोलीलाई कति चुनौति ? – Everest Dainik – News from Nepal
बीबीएलः सेमिफाइनल पुग्न सन्दीपको टोलीलाई कति चुनौति ?
काठमाडौं, माघ २६ । अष्ट्रेलियामा जारी बिग ब्याश लिग (बीबीएल) मा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध मेलबर्न स्टार्र्सले भोलि (आइतबार) सिड्नी सिक्सर्ससँग खेल्दै छ । खेल नेपाली समय अनुसार भाेलि बिहान ९ः३० बजेदेखि शुरु हुनेछ ।
सेमिफाइनल पुग्नका लागि भोलि सन्दीपको टोलीलले खेल जित्नै पर्ने हुन्छ । यदि यो खेल हारेमा सेमिफाइनल पुग्ने सपना लगभग समाप्त हुनेछ । अहिलेसम्म मेलबर्नले १३ खेलमा सातमा हार र ६ खेलमा मात्र जीत निकाल्न सफल भएको छ । सन्दीपको टोली आज अंक तालिकाको छैटौं स्थानमा झरेको छ ।
अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुग्दै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरिसकेको सिड्नीलाई हराउन मेलबर्नले सम्हालेर खेल्नुपर्ने हुन्छ । सिड्नीमा मोइसेस हेनरिक्स (कप्तान), सीन अब्बोट, जो डेनली, टोम कुरन, बेन ड्रासहुइस, नाथन लायन, पिटर नेविल, स्टीव ओ कीफे जस्ता नाम चलेका खेलाडी छन् ।
सन्दीपको टोलीमा उनी बाहेक ग्लेन म्याक्सवेल (कप्तान), पिटर ह्यान्सकम्ब, मार्कस स्टोनिस, एडम जम्पा, डिजे ब्राबो, बेन डुक,सेव गोज जस्ता स्टार खेलाडी छन् ।